एक रातको कति छ बिश्वका महंगा यौनकर्मीहरुको पारिश्रमिक ? - Lokpath Lokpath
२०७६, २६ मंसिर बिहीबार १५:१८
एक रातको कति छ बिश्वका महंगा यौनकर्मीहरुको पारिश्रमिक ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २६ मंसिर बिहीबार १५:१८
एजेन्सी । प्रायः मानिसहरुको स्वभाव नै हुन्छ, को मानिसहरु के मा चढ्छन् ? कस्ले के खान्छ ? कस्तो घरमा बस्छन् र यहाँसम्मकी कस्को मासिक तलब कति छ ? प्रायः हामीहरुलाई यिनै कुराहरुको खुल्दुली भइरहन्छ ।
अझ कलाकार, नेता र समाजमा मान्य व्यक्तिहरुले के गर्छन् भन्ने कुराहरुको त झनै चर्चा परिचर्चा धेरै नै हुने गर्दछ ।
त्यसै सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यौन बजारमा महंगा १० यौन कर्मीहरुको जानकारी गराउने छौँ ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामका अनुसार सन् २०१९ मा सबैभन्दा महँगा १० यौनकर्मीहरुको सर्वेक्षण गरिएको छ । जुन् सर्वेक्षण सन् २०१८ मा पनि भएको थियो । यौनकर्मीहरु यौन धन्दामा कोहि आफ्नै रहरले त कोहि कहरले संलग्न भएका हुन्छन् । सर्वेक्षणका अनुसार यौनकर्मीहरु वर्षेनी रुपमा बढ्दै गएको पुष्टि पनि गरेको छ ।
यि हुन् बिश्वका १० महंगा यौनकर्मी :
१०) जाहिया देहार :
‘गुडिया’ उपनाम पाएकी जाहिया देहारलाई गुडियासँग तुलना गर्नेहरु अधिकांश छन् । उनले आफ्ना ग्राहकहरुसँग एक रात बिताएको १२ सय डलर लिने गर्छिन् ।
९) लोरेडाना जोली :
महँगा १० यौनकर्मीहरुमा अटाएकी लोरेडोना जोलीले एक रात सँगै सुतेको २ हजार डलर लिने गरेकी छिन् । उनी आफ्ना ग्राहकहरुलाई रातको २ हजार डलर लिएर सन्तुष्ट बनाउने गर्छिन् ।
८) जस्ट कास्सान्द्रा :
जस्ट कास्सान्द्रा पनि महँगा यौनकर्मिहरु मध्येकै उक हुन् । उनी ग्राहकको चाहाना अनुसार नभएर आफ्नो चाहाना अनुसार ग्राहकहरु छान्ने गर्छिन् । उनी आफुले छानेको ग्राहकसँग मात्र रात बिताउँछिन् । उनको एक रातको मुल्य ३ हजार डलर रहेको छ ।
७) आश्ले ड्रुप्रेर (क्रिश्टेन) :
महँगा यौनकर्मीहरुको सूचीमा परेकी अर्की यौनकर्मी हुन् आश्ले ड्रुप्रेर (क्रिश्टेन) । उनीसँगै सुत्न ग्राहकहरुले एक रातको ४ हजार ३ सय डलर खर्च गर्नु पर्छ ।
६) एमएस माया ब्लु :
एमएस माया ब्लु सेक्सका साथसाथै आफ्ना ग्राहकहरुसँग नयाँ नयाँ ठाउँमा जान रुचाउँछिन् । नयाँ नयाँ ठाउँमा गएरु रमाइलो गर्नु उनको सौख नै हो । उनी आफ्ना ग्राहकहरुसँग एक रातको ४ हजार ५ सय डलर सलने गर्छिन् ।
५) आभा सियान :
आभा सियान यौनकर्मी त पक्कै हुन्, तर उनी रहरले होइन्, कहरले यौन पेषामा लाग्न बाध्य भइन् ।उनको जीवनमा यस्तो परिस्थिति आइपर्याे कि उनी यौन पेषामा लाग्न नचाहाँदा नचाहाँदै बाध्य बन्नु पर्याे । अकस्मात उनका पिता बिरामी परे । उनले आफन्तहरुसँग गुहार पनि मागिन् तर आफन्तहरुले अन्देख गरेपछि उनले बाध्य भएर आफ्नो शरिर बेच्नुपर्याे । उनले आफ्ना ग्राहकहरुको यौन प्यास मेटाएबापत एक रातको ६ हजार ५ सय डलर लिने गर्छिन् ।
४) अलिना पर्सिया :
अलिना पर्सिया १८ वर्षको सानै उमेरदेखि नै यौनपेषामा संलग्न छिन् । सानै उमेरमा कुमारित्व लिलामीमा राखेकी उनले एक रातको ८ हजार ८ सय डलर लिने गर्छिन् । उनले सन् २००९ बाट यौनपेषामा संलग्न भएर ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टि दिँदै आएकी छिन् ।
३) नताली म्याक्लेन्नान :
नताली म्याक्लेन्नान महंगा यौनकर्मीहरुको सूचिमा दोश्रो स्थानमा आउँछिन् । ग्राहकहरुको यौन सन्तुष्टिलाई पुरा गर्न उनले एक रातको १६ हजार डलर लिने गरेको सर्वेक्षणमा खुलाइएको छ ।
२) लौरेन :
लौरेन पनि यौनकर्मीहरु मध्येकी सुपरस्टार नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीसँग यौनप्यास मेटाउनको लागि नै कति मानिसहरु मरिहत्ते गर्ने गर्छन् । मिलेको शरीर र सुन्दर अनुहारले गर्दा नै लौरेनलाई अत्याधिक रुचाइएको सर्वेक्षणमा पत्ता लागेको हो । उनले ग्राहकहरुलाई यौन प्यास मेटाएबापत एक रातको २४ हजार डलर लिने गर्छिन् ।
१) क्यानिस फिल्म फेस्टिभल :
क्यानिस फिल्म फेस्टिभल बिश्वमा रहेका यौनकर्मीहरु मध्येकै सबैभन्दा महंगा यौनकर्मीहरुमा गनिन्छिन् । स्व सर्तमा काम गर्न रुचाउने उनको एक रातको मूल्य ४० हजार डलर रहेको छ । उनले एक रातको ४० हजार डलरमा ग्राहकहरुको रुचि पुरा गर्ने गर्छिन् ।